724l 725ln यू आकार बोल्ट स्क्वायर चीन 317l मा बनेको। 347. 309s.310s - Winrock
घर » फास्टनर स्क्रू » 724l 725ln यू आकार बोल्ट स्क्वायर चीन 317l मा बनेको। 347. 309s.310s
मोडेल संख्या: DIN3570 मानक यू-बोल्ट
6१6L u u आकार बोल्ट चीनमा बनेको: 24२24L u आकार बोल्ट वर्ग चीनमा बनेको छ
१.44443535 u आकार बोल्ट चीन मा बनेको: u आकार बोल्ट वर्ग चीन मा बनेको
सामग्री 6१6L, 6१6LN, 6१6Lmod, 6१6Ti, 7१7L, 7१7LN, 1२१,3१० एस,4०4L २ 254SMO AL6XN १.4529 29 २ सुपर
Ø Q: तपाईंको न्यूनतम आदेश मात्रा के हो?
Ø A: सामान्यतया MOQ प्रत्येक वस्तुको लागि १०० टुक्रा हुन्छ, तर यदि हामीसँग इन्भेन्टरी १ छ भने यो पनि स्वीकार्य छ। केहि विशेष भागहरूको लागि, मान्नुहोस् मोटरसाइकल एक्सेल, MOQ pieces० टुक्रा हुन सक्छ।
Ø Q: तपाइँ कुन भुक्तानी सर्तहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ?
Ø A: हामी तार स्थानान्तरण, पेपैल, वेस्टर्न युनियन स्वीकार गर्दछौं। %०% अग्रिम र ढुवानी अघि ब्यालेन्स।
Ø Q: तपाईंको फिर्ती नीति के हो?
Ø A: हामी त्रुटिहरूको साथ फर्काइएको वस्तुलाई स्वीकार गर्दछौं।
Ø Q: तपाईंको टाइटेनियम कच्चा मालको बारेमा के छ?
Ø A: हामीले प्रयोग गर्ने कच्चा माल १००% पग्लियो स्पन्ज टाइटेनियमबाट हुन्छ। हामी जस्तो छैन, धेरै अन्य कारखानाहरूले टाइटेनियम स्क्र्याप रिसाइक्लिंगबाट कच्चा माल प्रयोग गर्दछन्।
? प्रश्न: भन्सारको लागि घोषित मूल्यको बारेमा के छ?
Ø A: सामान्यतया हामी US $ 80 बाट US $ १२० र अधिकतम US $ 600 भन्दा बढि घोषित गर्दछौं। कृपया हामीलाई समयमै थाहा दिनुहोस् यदि तपाईं हामीलाई एक सही मूल्य घोषणा गर्न चाहनुहुन्छ भने।
Ø Q: anodized र color, PVD र and र सिरेमिक रंग बीच के भिन्नता छ?
Ø ए: एनोडाइज्ड रंगको मतलब टाइटेनियम पार्ट (एनोड) एक कम विघुतीय भोल्टेज अन्तर्गत प्रशोधन गरिन्छ, सामान्यतया १०० V भन्दा बढी हुँदैन, निश्चित समाधानमा स्टेनलेस स्टील क्याथोडको साथ। एनोडाइज्ड फिल्म धेरै पातलो छ, केवल धेरै माइक्रोनहरू, र स्क्र्याच गर्नका लागि धेरै सजिलो छ। एनोडाइज र colors्गहरूमा मुख्यत: निलो, सुन, गुलाबी, बैजनी, हरियो, इन्द्रेणी इत्यादि समावेश छन्।
सिरेमिक रंगको अर्थ टाइटेनियम पार्ट (एनोड) एक उच्च इलेक्ट्रिक भोल्टेज अन्तर्गत प्रशोधन गरिन्छ, सामान्यतया २ 250० V भन्दा कम हुँदैन, निश्चित समाधानमा स्टेनलेस स्टील क्याथोडको साथ हुन्छ। सिरेमिक फिल्म धेरै मोटा छ, करीव mic० माइक्रोनको, र स्क्र्याच गर्न धेरै गाह्रो छ। सिरेमिक रंगहरूमा मुख्यत: खैरो र खैरो रंग समावेश हुन्छ।
शारीरिक वाष्प जमावको अर्थ टाइटेनियम भाग खाली भट्टीमा प्रशोधन गरिन्छ, जसमा रंग स्पट्रि targe्ग लक्षहरू द्वारा बनाईन्छ। PVD रंगहरू मुख्यत: कालो, सुन र इन्द्रेणी सामेल छन्।
१ / / PPH स्क्रू, A453 GR 660 हेक्स बोल्ट, hastelloy C22 स्टड बोल्ट, incoloy 800 हेक्स बोल्ट, S32760 नायलन पागल, ss304 बोल्ट, ss304 पेंच, ss310 बोल्ट, ss310 फास्टनर, ss310 नट, ss310 पेंच, ss310 वाशर, ss316 पेंच, ss316Ti anchor, ss316Ti बोल्ट, ss316Ti पेंच, ss317 बोल्ट, ss317 फास्टनर, ss317 पेंच, ss317 वाशर, ss321 बोल्ट, ss321 पेंच, ss347 बोल्ट, ss347 पेंच, ss410 बोल्ट, ss410 फास्टनर, ss410 हेक्स बोल्ट, ss410 नट, ss410 पेंच, ss410 थ्रेड रड, ss410 धुने, स्टड बोल्ट S32750